Mimhanzi yatinayo muTunes ichave ichiwanikwa mune nyowani Apple Music application | IPhone nhau
Kana pamusoro pemakore wanga uchinge uchigadzira raibhurari yakakwana yemumhanzi kuburikidza neTunes, zvingangoita kuti nhau dze iTunes kunyangarika hakuite iwe chero kusetsa, sezvo ungave uri mugumo wemaraibhurari yako yemumhanzi sezvaunoiziva iwe uye kwawakakumikidza maawa mazhinji.
Kunyangwe dzimwe nguva zvinoita sekudaro Apple haifunge nezve vashandisiNekuvhurwa kweMacOS Catalina, iTunes sekuziva kwedu inonyangarika zvachose, zvichipa mashandisirwo matatu: Apple Music, Apple TV uye Apple Podcast. Nekudaro iTunes yeWindows haizokanganisike uye icharamba ichipa nekupa zvakafanana mabasa sezvazviri nhasi.
Neraki kune vashandisi veMac, Apple yavarangarira uye iyo Apple Music app ichave iyo yeku ndiye achange achitungamira, kubva pakatangwa macOS Catalina, yekuraibhurari kuti isu ikozvino pane iTunes.
Uye zvakare, ichatibvumidzawo isu kuramba tichifarira vese avo nziyo kana maalbhamu atakange tatenga kare kuburikidza iTunes, ichiratidza yakafanana yakafanana interface, saka zvinotidhurira basa rakawanda kuti tiibate. Izvo zvisati zvasimbiswa ndezvekuti zvicharamba zvichititendera here kuti tishandure maCD edu ave maodhiyo faira, kunyange zvichinyanya kuitika.
Kana tikabatanidza iPhone, iPad kana iPod touch kuMac yedu, pachinzvimbo chekuvhura application, icharatidzirwa muKutsvaga, sekunge chiri chinhu chakabatana. Paunenge uchidzvanya pane iyo unit, Mabasa akafanana atinogona kuwana nhasi muTunes anozoratidzwa kugadzira backup, dzosera mudziyo ...
Vashandisi veWindows, mutauriri weApple akasimbisa kuna Ars Technica, ichaenderera ichishandisa iTunes, sezvo pasina zvirongwa, zvirinani izvozvi, zvekuparadzanisa iTunes muzvikamu zvitatu senge zvavakaita neMacOS Catalina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Mimhanzi yatinayo muTunes ichave ichiwanikwa mune nyowani Apple Music application
Ese manomano ayo Safari anosanganisira muIOS 13 [VIDEO]
Mashandisiro ekushandisa mbeva neiyo iPad